दुई जना संक्रमित हुँदा लडाउन, चार हजार थपिदा खुला? – Karnalisandesh
दुई जना संक्रमित हुँदा लडाउन, चार हजार थपिदा खुला?
प्रकाशित मितिः २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १४:२४ June 11, 2020
काठमाडौँ। नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित माघ ९ गते पुष्टि भएको थियो। चीनको वुहानबाट आएका जनकपुरका एक विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी एक महिनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका थिए।
दुई महिनापछि फ्रान्सबाट आएकी एक युवतीमा चैत पहिलो साता कोरोना संक्रमण देखियो। उनी कतार एयरवेजमा दुबई हुँदै आएकी थिइन्। चैतको पहिलो सातासम्म नेपालमा दुईजना संक्रमितमध्ये एक निको भइसकेका थिए।
अर्कोको आइसोलेसनमा राखेर उपचार हुँदै थियो। तर, सरकारले एक हप्ते लकडाउनको निर्णय गर्यो। दुई सातासम्म नेपालमा कडा लकडाउन भयो। त्यसबेला तीन–चारजना मात्र संक्रमित थपिएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा देशव्यापी लकडाउन कडा बनाइयो। मानिसलाई सडकमा हिँड्न दिइएन। अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारियो।
तर, अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन तीव्र बढिरहेको छ। हालसम्म ४४ सय संक्रमित भइसकेका छन्। तर, सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ।
जतिबेला थोरै संक्रमित थिए, त्यतिबेला लकडाउन कडा पार्ने, अहिले ४४ सय संक्रमित पुगेपछि लकडाउन खुकुलो बनाउने भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। लकडाउन गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले लापरबाही गर्न थालेको र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल बनेको जस्ता नारा लाग्न थालेका छन्।
कोरोना संक्रमणको कुनै सम्भावना नभएको अवस्थामा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जानसमेत रोक लगाईएको थियो। काठमाडौँबाट फर्किएका नागरिकहरुलाई स्थानीय तहले १४ दिनसम्म बिनाकारण क्यारेन्टाइनमा राखेका थिए।
अहिले सामान्य आरडिटी परिक्षणका भरमा भारतबाट आएका नागरिकहरुलाई धमाधम घर पठाउने काम भइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा भारतबाट आएका नागरिकहरुलाई कमस खुवाएर घर पठाइएको थियो।
उनीहरुले दुई दिन अघि पनि बालुवाटारमा सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। सो प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो।